के रोजगारदाताहरूले कर्मचारीहरूलाई ट्र्याक गर्न GPS प्रयोग गर्न सक्दछन्? | सिंगापुर शीर्ष मिनी जीपीएस निजी ट्र्याकर अटिजम / अटिस्टिक किड्स र डिमेन्शिया बुजुर्गका लागि
GPS भनेको "ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम" हो। जीपीएस ट्र्याकिंग प्रणालीमा पोर्टेबल उपकरणहरू हुन्छन् जुन मानिसहरूलाई तत्काल मोनिटर गर्न र तिनीहरूको स्थानहरू ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ। यसको पछाडि मुख्य कुरा अन्तरिक्षमा उपग्रहहरू हुन् जुन प्रायः व्यक्तिको स्थान निर्दिष्ट गर्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईं कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको फरक पर्दैन, जीपीएसले तपाईंलाई तपाईंको स्थान प्रभावकारी रूपमा बताउँदछ। प्रायः जीपीएस ट्र्याकिंग प्रणाली स्थानहरू खोज्न प्रयोग गरिन्छ। बाटोमा हराउनु भयो? समस्या छैन! GPS ले सबैभन्दा सही स्थान दिनेछ जसमा तपाईं हाल हुनुहुन्छ र तपाईंलाई तपाईंको गन्तव्यमा मार्गदर्शन गर्दछ। अब हामी जीपीएस ट्र्याकिंग प्रणालीले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे एक विचार गरौं।
GPS ट्र्याकिंग प्रणाली को उपयोग:
GPS विज्ञानको उदात्त आविष्कार हो। यसले हाम्रो जीवनलाई सजिलो बनाउँदछ र यसमा धेरै अनुप्रयोगहरू छन्। मूल रूपमा यसको कुनै पनि सवारी, व्यक्ति, घरपालुवा जनावर वा कुनै सम्पत्ति ट्र्याक गर्न फंक्शन हुन्छ। यो दूरी र गति गणना गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि यहाँ हाम्रो मुख्य चिन्ता यो हो कि यो रोजगारदाताहरूले उनीहरूका कामदारहरूलाई ट्र्याक गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्? यो यहाँ प्रश्न हो। यसलाई हेरौं।
रोजगारदाताहरूले उनीहरूका कामदारहरूलाई ट्र्याक गर्न सक्छन्? यदि हामीले यसलाई सामान्य परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दछौं भने नियोक्ताहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सजिलै ट्र्याक गर्न सक्दछन् र तिनीहरूलाई यो गर्न कुनै कठिनाई हुँदैन। त्यहाँ केहि सरल तरिकाहरू छन् जुन तिनीहरू यो गर्न सक्दछन्। तिनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको गाडी ट्र्याक गर्न सक्छन्। त्यहाँ अन्य धेरै तरिकाहरू छन् जुन रोजगारदाताहरूले उनीहरूका कर्मचारीहरूलाई ट्र्याक गर्न सक्दछन्। तर यदि हामीले यो अर्को परिप्रेक्ष्यबाट देख्यौं भने, "के यो रोजगारदाताहरूले आफ्ना कामदारहरूलाई ट्र्याक गर्नु उचित हो?" यस अवस्थामा त्यहाँ केहि नियमहरू छन् जुन ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ। नियोक्ताहरूसँग आफ्ना कामदारहरूलाई ट्र्याक गर्ने अधिकार छ तर केवल उनीहरूको कामका घण्टामा। तर काम गर्ने घण्टा बाहेक, तिनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको ट्रयाक राख्नु हुँदैन किनकि यो खराब र अनैतिक कार्य हो।
कर्मचारीहरूलाई कसरी ट्र्याक गर्न सकिन्छ?
हामी देख्न सक्दछौं कि रोजगारदातासँग उनीहरूका कर्मचारीहरूलाई ट्र्याक र मोनिटर गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। यद्यपि हामीले केहि आधारभूत तरिकाहरू स collected्कलन गरेका छौं जुन प्राय: प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूलाई हेरौं:
नियोक्ताहरूको ट्रयाक र निगरानी गर्न को लागी सबैभन्दा आधारभूत तरीका उनीहरुको गाडीहरु लाई ट्र्याक गर्नु हो। हामी बजारमा धेरै भरपर्दो ट्र्याकि devices उपकरणहरू फेला पार्न सक्छौं जुन सवारी सवारीको ट्र्याकिंगको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी ट्र्याकि devices उपकरणहरू कर्मचारीको गाडीको कुनै पनि अंशमा जोडिएको हुन्छ र बाँकी उपकरणमा छ। यसले सफलतापूर्वक कर्मचारीहरूको ट्रयाक राख्नेछ। त्यसकारण, हामीले हाम्रो कर्मचारीहरूलाई ट्रयाक गर्न सक्ने सबैभन्दा आधारभूत मार्ग उनीहरूको सवारी साधनहरू ट्र्याक गरेर हो। तर यसमा केही त्रुटिहरू पनि छन्। सामान्यतया, कर्मचारीहरूले आफ्नो कामको लागि आफ्ना सवारीहरू प्रयोग गर्छन्। तर यो केवल सडकमा सीमित छ। जसरी गाडी गन्तव्यमा पार्क गरिएको छ, हामी भन्न सक्दैनौं कि त्यहाँबाट कर्मचारी कहाँ गएका छन्। ऊ त्यस ठाउँमा कतै कतै कतै हिडिसकेको हुन सक्छ। त्यसकारण हामीसँग यो विधिद्वारा कर्मचारीहरूको सही स्थान हुन सक्दैन।
स्मार्ट फोन ट्र्याकिंग:
यो कर्मचारिको ट्र्याकिंग र अनुगमनको अर्को तरीका हो। स्मार्टफोन्स उपकरणहरू हुन् जुन यस संसारमा सामान्य छ। हामी लगभग सबैलाई देख्न सक्छौं र सबैजनासँग आज स्मार्टफोन वा कमसेकम मोबाइल फोन छ। मोबाइल फोनहरू एक तरीकाले विकसित गरियो जुन प्रयोगकर्ताका लागि पूर्ण-समय जीपीएस ट्र्याकिंगलाई समर्थन गर्दछ। यो प्रणाली तिनीहरूको रोजगारदाताहरू द्वारा कामदारहरूलाई ट्र्याक गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। कर्मचारीको उपकरण कर्मचारीको उपकरण संग जोडिएको छ र यो नियोक्तालाई लगातार आफ्नो कर्मचारी निगरानी गर्न अनुमति दिनेछ। यो सवारी को मामला मा जस्तै समस्या पैदा गर्दैन। किनभने यो स्पष्ट छ कि मोबाइल फोनहरू कहिँ पनि छोड्न सकिदैन वा तिनीहरू प्राय: प्रयोगकर्ताबाट टाढा हुँदैनन्। त्यसकारण, हामीले कर्मचारीहरू ट्र्याक गर्न सक्ने उत्तम तरिका भनेको स्मार्ट फोन ट्र्याकिंग हो। यद्यपि ट्र्याकिमा केहि नियमहरू पनि हुनुपर्दछ। यो कामका घण्टामा मात्र हुनुपर्दछ। अन्यथा, यो रोजगारदाताका लागि अवैध कार्य हो।
कर्मचारी ट्र्याकिंगका लागि नियमहरू:
जहाँसम्म रोजगारदाताहरू द्वारा कामदारहरूको ट्र्याकि concernedको सवाल हो, त्यहाँ केहि नियम र दिशानिर्देशहरू छन् जुन दिमागमा राख्नुपर्दछ र पछ्याउनुपर्दछ। यो तपाइँको कर्मचारीहरु कडा मेहनत गरीरहेको छ र यो कम्पनी को बिक्री पनि राम्रो परिणाम दिँदै रहेछ भनेर जान्नु एक धेरै संवेदनशील कुरा हो। त्यसोभए मूलतः यो सबै रोजगारदाता र उसले कसरी ट्र्याकिंग प्रणाली प्रयोग गर्दछ मा निर्भर गर्दछ।
हामी केहि महत्त्वपूर्ण नियमहरूमा एक नजर राख्दछौं जुन नियोक्ताले विचार गर्नुपर्छ:
कम्पनीले जीपीएस कर्मचारी ट्रयाकि forको लागि उत्तम अभ्यासहरूमा आधारित एक कम्पनी नीति विकास गर्नुपर्दछ, र नीति सबैको लागि अनुसरण गर्न अनिवार्य हुनुपर्दछ। त्यसो भए रोजगारदाता वा कम्पनी हेडले प्रत्येक कर्मचारीको सहमतिबाट नीति बनाउनु पर्छ। नियमहरू प्रत्येक कर्मचारीको अगाडि प्रस्तुत गरिनुपर्दछ र उनीहरूलाई कम्पनी नीतिको बारेमा स्वतन्त्र रूपमा राय दिन अधिकार हुनुपर्दछ। यस तरीकाले, रोजगारदाताहरूले उनीहरूको सहमति लिएर उनीहरूका कामदारहरूको ट्र्याक राख्न सक्दछन्। तिनीहरू पनि कम्तिमा वार्षिक दिशा निर्देशहरु समीक्षा लिनु पर्छ सुनिश्चित गर्न को लागी GPS ट्र्याकिंग उपयोगी तरीकाहरु मा आफ्नो व्यवसाय को समर्थन गर्छ र कानून मा कुनै लागू परिवर्तन प्रतिबिम्बित गर्दछ।
ट्र्याकिंग र कानून:
ट्र्याकि and र अनुगमनको यस क्षेत्रमा सरकारको पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। प्रकाशनको समयमा, संघीय कानूनहरूले सरकारले जीपीएस ट्र्याकि withको साथ के गर्न सक्दछ र के गर्न सक्दैन भन्ने आदेश गर्दछ, तर केहि कानूनले व्यवसायलाई जीपीएसको साथ अनुगमन गर्नबाट रोक्छ। अर्कोतर्फ, राज्यहरूसँग गोपनीयता कानुनहरूको प्याचवर्क हुन्छ जसले ट्र्याकि limit सीमित गर्दछ।
12862 कुल दृश्यहरू5हेराइ आज